Canada Oo Sheegtay Inay Qaadaneyso 20,000 Oo Qaxooti Ah – somalilandtoday.com
Dowladda Canada ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay ee ku yabooha inay ay qaadanayaan illaa 20,000 oo qaxooti reer Afghanistan ah.
Hase yeeshee dowlada Canada ayaa sheegtay in qaxootiga ay qaadanayso ay yihiin madaxda ururada haweenka, shaqaale dowladeed iyo dad kale oo wajahaya hanjabaadyo ka imanaya Taalibaan, xillii maleeshiyada Taalibaan ay ku sii baaheen waddanka oo dhan.
“Xaaladda Afghanistan waa mid qalbijab leh, inaguna ma eegan doonno,” ayuu Wasiirka Socdaalka Marco Mendicino ka sheegay shir jaraa’id o uu Jimcihii qabtay.
Canada ayaa sheegtay inay si dhow ula socoto xaaladda Afghanistan, ayna kala shaqeyneyso xulafadeeda ku sugan waddankaas. “Ilaalinta Safaaradda Canada iyo shaqaalaheenna ayaa ah ahmiyadeenna koowaad,” ayuu yishi Wasiirka Arrimaha Dibadda Marc Garneau.